Global Startup weekend women : fifaninanana mamaritra tetikasa | NewsMada
Global Startup weekend women : fifaninanana mamaritra tetikasa
Manome lanja ny fandraharahan’ny vehivavy ny fikambanana Global startup weekend women. Hetsika voalohany karakarain’ny sampana Antananarivo, ny fifaninanana mamolavola tetikasa.
Niorina tany Etazonia ny fikambanam-behivavy Global startup weekend women (GSWW). Misy ny sampana GSWW Antananarivo, ary mikarakara hetsika voalohany, ny 9-11 febroary ho avy izao eny amin’ny trano malalaky ny American center, eny Tanjombato. Fifaninanana ifandrombonan’ny olona maromaro (tanora mpianatra sy ny efa matihanina), mamolavola tetikasa ao anatin’ny 54 ora, ny zoma 9, ny asabotsy 10 ary ny alahady 11 febroary. Tsy misy seha-pihariana manokana, fa nilaza Rtoa Rakotondrainibe Carole, anisan’ny mpikarakara, fa tokony ho tetikasa vaovao tsy mbola nisy nanatanteraka sady mipaka amin’ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara. Eo koa ny fanomezan-danja ny vehivavy, saingy afaka mandray anjara avokoa ny lahy sy ny vavy.
Ankoatra ny mpitsara maromaro, misy koa ny mpiahy (coach) miisa 25, hanampy sy hanohana ny mpifaninana mandritra ireo fotoana ireo, hanatsara sy hampahomby ny tetikasan’ny mpandray anjara. Maro ny orinasa eto an-toerana sy iraisam-pirenena manohana ny hetsika.
Hifandraisana amin’ny mpandraharaha
Nilaza Rtoa Rakotondrainibe Carole, fa tombondahin’ny mpandray anjara amin’ireo fotoana ireo koa ny hihaonana sy hifandraisana amin’ny mpandraharaha, orinasa misahana seha-pihariana maro lafy samihafa sy isan-karazany.
Anisan’ny haneho hevitra amin’ny fotoana ny filoha tale jeneralin’ny orinasa Axian, Hassanein Hirdjee, manome vahana sy mampiroborobo ny fandraharahana eto Madagasikara. Misy amin’ireo orinasa mpiara-miombon’antoka koa vonona hanohana ny tetikasan’ny mpandray anjara, hita fa mifanandrify amin’ny seha-pihariany
Hiatrika ny fifaninanana famaranana any Paris, ny marsa ho avy , ny mpandray anjara manana ny tetikasa mendrika indrindra eto Madagasikara, hifaninana amin’ireo avy any amin’ny tanàna 20 hafa.
Adiresy ifandraisana: http://www.startupweekend.org/ sy http://globalswomen.com/fr/accueil